SP-USB01 120ml Ultrasonic Woodin Grain USB Diffuser, Shiinaha SP-USB01 120ml Ultrasonic Wood Grain Grain USB Soo-saareyaasha Soo-saareyaasha, Shirkadaha, Warshadaha - Sunpai warshadaha Xaddidan
120ml Ultrasonic Wood Grain USB Dheecaan
1.MULTI-FUNCTION: The USB mini aromatherapy diffuser wuxuu bixiyaa faa'iidooyin badan. U isticmaal diffuser la qaadan karo, qaboojiye xafiis ama hawo-qaboojiye. Ku raaxayso jawiga leh caraf udgoonku jecel yahay oo ka buuxsama meel kasta, ilaali deegaan xor ah oo ur ah.
2.Iyada oo kala daadisa caraf udgoon iyo neef qaadasho ah: wajigaani waxa uu walaaca ka qaadi karaa maalinta xiisadda leh, ee kufiican daboolida qiiqa iyo udgoonka xun ee xayawaankaaga.
3. Howlgalka UltraWerper-Quiet Ultrasonic: Iskuday meesha aad ku nooshahay si looga hortago qallalan, hawo cufan iyo hargab ku faafa dadka aad jeceshahay. Ka hortag maqaarka qalalan iyo jajaban bilaha jiilaalka ama qolka qaboojinta.
4. Ku-shaqeynta Quful Automatic: Xir markay biyuhu biyuhu dhammaadaan. Faa'iido u leh guriga, yoga, xafiiska, spa, qolka, iyo qolka da’yarta. Hadal kufiican qoyskaaga iyo asxaabtaada si looga helo nasasho ku saleysan udgoon.
Cabbirka Cutubka Φ116 * 142mm
miisaanka Unit 380g
Cabbirka sanduuqa midabka 12 * 12 * 15.5 cm
Cabbirka kartoonka 50 * 37.5 * 34CM
NW / kartoon 9.5kgs
GW / kartoon 10.5kgs